AD MIN – Play GAMES
10/08/2019 AD MIN Leaveacomment
*Ranked 2nd Top Free game in Singapore Google Play Store (Sep 2017) Lucky 13 is an enhanced version of the well known 13 Cards / Chinese Poker loved by all. This intuitive poker puzzle game features fast-paced matches with exciting new features. Each match is an intense battle of wits
Thirteen poker, Shan Koe mee, Boogyi, Shwe Shan, Carrom မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း ၅ ဆင့်ဝင် ဂိမ်းများဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိသောဆရာကြီးများနှင့် ၁၃-ချပ်ပိုကာ ကစားဖို့ သူငယ်ချင်းတွေလိုက်စုနေစရာမလိုပဲ အွန်လိုင်းနဲ့ဖွှင့်ပြီးကစားရုံနဲ့ အပြင်မှာကစားနေသလိုမျိုး အရသာနဲ့ပျော်ရွှင်စရာတွေကိုပေးဆောင်နိုင်မယ့် မြန်မာ-ပိုကာ ဂိမ်း ကို ZingPlay မှ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ – အခမဲ့ ဒေါင်းလုပ်ရယူပြီး၊ ရွှေတွေလည်း နေ့စဉ် အလကားယူလိုက်ပါ။– အလန်းစား ရုပ်ထွက်၊ သာယာညိမ့်ညောင်ဖွယ်ကောင်းသော အသံ များဖြင့် စွဲမက်နေစရာကောင်း သော Game Play – သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ ပျော်ပျော်ပါးပါး ပိုကာ ဒေါင်းနိုင်မယ့်အခွှင့်အရေး– တစ်ခါကစားတာနဲ့ တစ်သက်စွဲမက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ကို အတွေ့အကြုံအသစ်နဲ့